आज २०७६ मंसिर ३० गते सोमबार तपाईको राशिफल कस्तो छ ? पढ्नुहोस – Jaljala Online
आज २०७६ मंसिर ३० गते सोमबार । ज्योतिष शास्त्रमा जन्म समय अनुसार फलादेश हुन्छ । सोही अनुसार उनीहरुको दैनिकी कस्तो रहन्छ ? भन्ने विषयमा भविष्यवाणी गरिन्छ । तपाईको आजको दिन कस्तो रहनेछ ? ज्योतिष एस्ट्रो राजले यस्तो फलादेश गर्नुभएको छ-
सांसददेखि राष्ट्रपतिसम्मको तलब वृद्धि, कसको कति बढ्यो ? (सुचीसहित)
Posted on May 31, 2019 May 31, 2019 Author Jaljala Online
जेठ १७, काठमाडौं । सरकारले सांसददेखि राष्ट्रपतिसम्मको तलब बढाएको छ। यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा नरेन्द्र साउदले लेखेका छन् । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बुधबार संसद्मा सार्वजनिक गरेको बजेटमा राजपत्र अनंकित (सुब्बासम्म) को २० प्रतिशत र राजपत्रांकित (अधिकृत र सोभन्दा माथि) का कर्मचारीको तलबमा १८ प्रतिशत वृद्धि हुने घोषणा गरिएको थियो। कर्मचारीको तलब वृद्धिसँगै भीभीआईपीको […]
Posted on August 1, 2019 Author Jaljala Online
आफैं क्यान्सरसँग जुध्दै बिरामी जाँचिरहेकी डाक्टर २८ वर्षमै बितिन् [नालीबेली]
असार ४, काठमाडौं । सुशीलाकुमारी यादवले २०७१ सालमा नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजबाट एमबिबिएस गरिन्। त्यसपछि कामको खोजीमा काठमाडौं आइन्। यो खबर खिलानाथ ढकालले सेतोपाटीमा लेखेका छन् । कामको खोजीसँगै एमडी गर्ने उनको उद्देश्य थियो। दुबै सम्भावना खोजेर राजधानी छिरेकी थिइन्, उनी। सम्पन्न पारिवारिक पृष्ठभूमिकी यादवलाई एमडी गर्न पैसाको समस्या थिएन। एमबिबिएस सकेपछि चिकित्सकको व्यावहारिक अभ्याससँगै पेसाबाटै […]